रोचक - Pahilo News
काठमाडौं,६ असार । पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्नुपर्‍यो। यसलाई बन्द गरी राख्नुभएन’, सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यसभित्र के छ ? भएको सम्पत्ति सबै खरानी भयो कि बाँकी छ ? हेरांै त।’ राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा बिहीबार उनले राजनीतिक सहमति गरेर वा कानुनै बनाउनुपर्ने भए बनाएर पनि मूल ढुकुटी खोल्नुपर्ने बताए। उन..
विवाहको मण्डपमा बसेर दुलहाले पब्जी खेलेपछि…
विवाह दुई आत्मको मिलन हो । विवाह गरेपछि हरेक मानिसको जिवनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन..
गुगलबारे रोचक ६ तथ्य जहाँ २ सय बाख्राले रोजगारी पाए
काठमाडौं । तपाई गुगल सर्च इन्जिन दिनदिनै प्रयोग गर्नुहुन्छ। जुन सर्च ईन्जिनबाट फ..
यस्ता छन खाली पेटमा लसुन र पानी खानुका फाइदा
लसुन प्रायः हामीले तरकारी पकाउँदा प्रयोग गर्ने गर्छौ तर यसका स्वास्थ्यसम्बन्धी ध..
नेपालगञ्जमा रामलीला प्रदर्शन
नेपालगञ्ज, १ कात्तिक । नेपालगञ्जमा १५० वर्षदेखि भगवान् रामको जीवनमा आधारित रामली..
युट्युवको मुख्य सर्भरमा समस्या, विश्वभर बन्द
काठमाडौं, असोज ३१। बुधबार विहानबाट युट्युव बन्द भएको छ । मुख्य सर्भरमै समस्या भएपछि विश्वभर एकैपटक युट्युब बन्द भएको हो । नेपाली समय अनुसार विहान करिव सात बजेबाट समस्या आएको युट्युवले जनाएको छ । मुख्य सर्भरमात्र नभएर त्यसभित्रका ५ सय बढी आन्तरिक सर्भरमा समेत समस्या आएको छ । समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टिम लागिरहेकाले केही समय..
गौशाला, ३० असोज । परम्परादेखि बडादशैँका बेला सञ्चालन हुँदै आएको महोत्तरी जिल्लाको प्रसिद्ध सोनामाई मन्दिरमा आजदेखि भूत मेला शुरु भएको छ । जिल्लाको औरही नगरपालिका–७ मा अवस्थित उक्त शक्तिपीठमा आज बडादशैँको सप्तमी तिथिदेखि यहाँ भूतमेला शुरु भएको सोनमाई माताका मुख्य पूजारी कामेश्वर झाले बताउनुभयो ।बिजयादशमीको दिनसम्म आयोजना हुने उक्..
गोरखाबाट फूलपाती सहितको डोली हनुमानढोका दरबार पठाइयो
गोरखा, ३० असोज । गोरखा दरबारस्थित दशैँ घरबाट काठमाडौँको हनुमानढोका दरबारका लागि फूलपाती सहितको डोली पठाइएको छ । विधिपूर्वक पूजाअर्चना गरेर दरबारका सुसारेले मङ्गलबार बिहानको शुभसाइतमा फूलपाती सहितको डोली काठमाडौँ पठाएका हुन् । डोलीलाई बा २० च ४३९४ नं को निजी गाडीमा राखेर हनुमान ढोका दरबार पठाइएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका सूचना..
हत्याको अघिल्लो दिन सबैलाई ‘बाई’ गरेकी थिइन ऐश्वर्यले
हँसिलो अनुहार बनाउँदै दरबारका कहानी बताउन उत्साहित भइन्, विष्णुप्रिया अधिकारी । दरबारमा २१ वर्ष पुजाकोठेको रुपमा काम गरेकी विष्णुप्रियालाई दरबारका कहानी भन्न रमाइलो लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘मुमाबडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मी शाहले बकसमा दिएको २५ हजारले मैले बानेश्वरमा घडेरी किनेँ र अहिले त्यही घर बनाएर बसेकी छु ।’ उनी अहिले ७६ वर्ष प..
पर्यटकीय नगरी दोलखा जीरीका तस्विरहरु हेर्नुहोस
रोपाइँ नाच’ प्रदर्शन
बेनी, १६ भदौ । एक महिने लामो बर्खेनाचअन्र्तगत शुक्रबार जिल्लामा ‘रोपाइँ नाच’ देखाइएको छ । बेनीमा बस्ती बसेदेखि नै देखाउन थालिएको उक्त नाचसँगै लाखे, घोडा, नागनागीनी, गोरु र जोगी नाच पनि देखाइने गरिन्छ । नेपाल भाषा मंका ः खल ः को मूल आयोजनामा निकालिएको उक्त नाचमा जिल्लास्थित विभिन्न जातजातिको वेषभूषामा सजिएका कलाकारले नृत्य देखाए..
एउटी आमाले यसरी रोकिन बालविवाह
जाजरकोट, १५ भदौ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र बाल सञ्जालको सक्रियतामा एउटी महिलाले छोरीको बालविवाह रोकाएकी छिन् । शेराखहरे कालिका माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छेडागाड नगरपालिका–९ की १६ वर्षीया राधिका रोकायले कोहलपुर नगरपालिका–८ झरकट्टी निवासी १८ वर्षीय प्रेम बुढासँग भागेर कोहलपुरमा विवाह गरेका थिए । छोरीले यही भदौ १..
काठमाडौँ, १५ भदौ । नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–१ का अनन्तराम केसीले ९० घण्टा दुई मिनेट निरन्तर वक्तव्य दिएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । भदौ ११ गते बिहान ६ बजेदेखि निरन्तर वक्तव्य दिनुभएका उहाँले बिहीबार मध्यरातसम्म निरन्तर वक्तव्य दिएर सो किर्तिमान कायम गर्नुभएकोे हो । केसीले भारत केरेलाका केपी भाल साराजानले ८१ घण्टा १६ मिने..
यौनानन्दमा लिङ्गको साइजले महत्व राख्लात ?
काठमाडौं । यौनानन्दमा लिङ्गको साइजले खासै महत्व राख्दैन भन्ने गरिन्छ । तर पनि लिङ्गको साइज ठूलो हुनुले यौनसम्पर्कमा आफ्नी यौन साथिलाई आनन्द दिन सकिन्छ भन्ने विचार प्राय पुरुषहरुमा रहेको पाइन्छ । खासगरी लिङ्गको साइजलाई भौगोलिकताले फरक पारेको हुन्छ । जहाँ अधिकांश एसिया देशमा लिंगको आकार ३ इन्च ९शिथिल अवस्थामा० हुन्छ । त्यसैगरी अफ्..
काठमाडौँ, १४ भदौ एशिया प्रशान्त क्षेत्रको हस्तकलाको विकास र विस्तारका लागि एशियाका हस्तकला व्यवसायी काठमाडौँमा भेला भएका छन् । राजधानीमा विहिबारदेखि शुरु भएको विश्व कला परिषद् एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ३७ औं साधारण सभा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा विभिन्न १६ मुलुकका कालीगढ तथा कलाकारले आ–आफ्ना मुलुकका कला, संस्कृतिसँग हस्तक..
नेपालगञ्ज, १४ भदौ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको छ । यसको शुरुवात गाउँपालिकाको अगैयास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट गरिएको छ । सो विद्यालयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू र इम्पेटस नेपाल प्रालिका अध्यक्ष जीव..
काठमाडौँ, ९ भदौ । मिस टुरिज्मको उपाधि भक्तपुरकी मनिता पौडेलले जितेकी छिन् । आज भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा आफ्ना १२ प्रतियोगीलाई उछिन्दै पौडेलले मिस टुरिज्मको ताज चुमेकी हुन् । जितसँगै उनले नगद रु ५० हजार हात पारिन् । पौडेलले मिस फोटेजेनिकको उपाधिसमेत जितेकी छिन् । प्रतियोगिताको फस्ट रनरअपको उपाधि प्रकृति ढकालले जितेकी छिन् भने श..
अण्डर पास’ निर्माण अन्तिम चरणमा
ललितपुर, ६ भदौ । कलङ्कीको जाम हटाउने समाधानका रुपमा हेरिएको कलङ्की–खसीबजार ‘अण्डर पास’ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक÷दुई सातापछि ‘अण्डर पास’ खुला हुने कलङ्की–कोटेश्वर सडक निर्माणमा समन्वय गरिरहेको चक्रपथ सुधार योजनाले बताएको छ । आठ सय मिटर लामो ‘अण्डर पास’ मा दुई तह कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको योजनाका इञ्जिनियर निरञ्जन शर्मा अ..
वेलिङ्टन, ४ भदौ । न्यूजिल्यान्डकी महिला मन्त्री जुली आन गेन्टर पहिलो बच्चा जन्माउने क्रममा प्रसूतिका लागि आफैंले साइकल चलाएर अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । साइकलप्रेमी ग्रीन पार्टीकी सांसद गेन्टरले साइकलबाट घरदेखि एक किलोमिटर टाढाको अकल्यान्ड सिटी अस्पतालसम्म यात्रा गरी प्रसूतिका लागि भर्ना हुनुभएको थियो । “मेरा पति र म साइकल..
मुलुकी ऐन संशोधन माग राखेर नाङ्गै प्रदर्शनमा उत्रेका एक युवा प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं, १ भदौ । मुलुकी ऐन संशोधन र राष्ट्रिय जनावार बदलीको माग राखेर नाङ्गै प्रदर्शनमा उत्रेका एक युवालार्इ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रावार सिंहदरवारको पुर्वी गेट नजीक हनुमानस्थनमा जनवार सबै एक हुन्, कानून सबैलाई लागू गर, मुलुकी ुऐन संशोधन गर र राष्ट्रिय जनावर बदली गर’ लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड वोकेर नागैं प्रदशन ..
साझा प्रकाशनमा को वन्ला अध्यक्ष ?
काठमाडौं, २४ साउन। ऋण र घाटाबाट अझै उक्सिन नसकेको साझा प्रकाशनमा अहिले अध्यक्ष बन्न चाहनेहरूको खोजी भइरहेको छ । महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले महाप्रबन्धकका साथै अध्यक्षसमेत बन्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा धाएर तीव्र रूपमा लबिइङ गरिरहे पनि उनीबाहेकका मानिसको खोजी भइरहेको छ । डुब्दो अवस्थामा रहेको सो प्रकाशनमा अध्यक्ष बन्न जा..
सातै प्रदेशमा लाखौंको जनपरिचालन गर्ने नेकपाको तयारी, ५ भदौ एकीकरणको अन्तिम समयसीमा
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले आगामी ५ भदौभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरुको एकीकरण सम्पन्न गरेर सातओटै प्रदेशमा लाखौंको जनपरिचालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरणको ढिलाई र अलमलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै गति दिने योजनासमेत प्रभावित भएको नेकपाको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षसहित अ..
शुक्रबार राति १२ बजेर ९ मिनेटमा खग्रास चन्द्रग्रहण, के के सावधानी अपनाउने, हेर्नुहोस
काठमाडौँ, ११ साउन । आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिेन शुक्रबार राति खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने छ । शुक्रबार राति १२ बजेर ९ मिनेटमा चन्द्रग्रहणले लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । खग्रास चन्द्रग्रहणको सम्मिलन मध्यराती १ बजेर १५ मिनेटमा हुनेछ भने ग्रहणको समाप्ति राति २ बजेर ५८ मिनेटमा हुनेछ । राति २ बजेर ८ मिनेटमा ग्रहणको ..
८० लाख तलब खाने पनि गरिब !
काठमाडौ, २७ असार । संसारमा यस्तो शहर छ जहाँ ८० लाख कमाउने पनि गरिबका रुपमा व्यक्तिको रुपमा हेरिन्छ । अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देशको एउटा शहर जहाँ ८० लाख महिनाको तलब हुँदा पनि गरिब व्यक्तिको रुपमा गणना हुन्छ । यहाँको सैन फ्रासिस्को भन्ने शहरमा ८० लाख कमाउने पनि गरिबको रुपमा लिइन्छ । आवासीय तथा शहरी विकास […]
विश्वकप फुटबलमा शनिवारदेखि नकआउट चरणको खेल,तालिका सहित
काठमाडौं, १६ असार । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा शनिवारदेखि नेकआउट चरणको खेलमा १६ देशबीच प्री–क्वार्टरफाइनल खेल हुँदैछ । विश्वकपको समूह चरणमा ३२ देशबीच भएको प्रतिष्पर्धाबाट १६ देश छानिएका छन् भने शनिबार ४ देश प्रतिष्पर्धामा उत्रिँदैछन् । नेपाली समयअनुसार बेलुका पौने ८ बजे अर्जेन्टिना र फ्रान्सबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । अर्जेन्टिना स..